Mitero: yapfuura neazvino | Law & More BV
Blog » Mitero: yapfuura neazvino
Mitero: yapfuura neazvino
Nhoroondo yemutero inotanga munguva dzeRoma. Vanhu vaigara munharaunda yeChechi yeRoma vaifanira kubhadhara mutero. Mitemo yekutanga yemitero muNetherlands inoonekwa muna 1805. Nheyo yekutanga yemutero yakazvarwa: mari. Mari yemutero yakanyoreswa muna1904.
VAT, mutero wemubhadharo, mutero unobhadharwa, mutero wekambani, mutero wezvemamiriro ekunze - izvi zvese chikamu chemitero yatinobhadhara nhasi. Isu tinobhadhara mutero kuhurumende nekumatunhu. Nemari inowanikwa, Ministry of Infource yeNetherlands, semuenzaniso, inogona kutora hanya mabikes; kana matunhu ezvekutakura vanhu.
Nyanzvi dzezvehupfumi dzichiri kukurukura mibvunzo yakadai sekuti: ndiani anofanira kubhadhara mutero? Chii chinofanira kuva iyo mutero? Mari yemitero inofanira kushandiswa sei? Nyika isina mutero haigone kuriritira vagari vayo.
Previous Post Iwe uri wechiDutch uye unoda here kuroora kune dzimwe nyika?
Next Post The Netherlands mutungamiriri wekuvandudza muEurope